HomeHoryaalka SpainIvan Rakitic oo sheegay in ay sharaf u tahay ka garab ciyaarista laacibka Aduunka Leo Messi
Ivan Rakitic ayaa wax badan ka garab ciyaaray Lionel Messi, waxa oo sheegay in ka jooga meel sare aan la qiyaasi karin.
Xidiga reer Croatia ayaa maalida Barcelona xirnaa mudo gaareysa ilaa lix sano.
– Aniga oo ixtiraam u haya dhamaan halyeeyada – waxaa jira kaliya hal ciyaaryahan waana Leo Messi, Rakitic ayaa u sheegay Website-ka Fifa.
Ivan Rakitic ayaa lix sano kadib ka tagay Barcelona isagoo dib ugu laabtay Sevilla, waa kooxdiisii hore oo afar sano kusoo qaatay ka hor inta oo kusoo biirin kooxda Catalonia.
​​Rakitic ayaa ka qeyb qaatay guulo badan ay gaartay sagoo kula guuleystay afar La Liga, Champions League, afar Copa del Rey, European Super Cup iyo koobka kooxaha adduunka. wax oo saftay 311 ciyaarood, waxa oo dhaliyey 35 gool sidookale 42 caawiye. Waxa oo inta badan caawin jiray Lionel Messi.
Wareysi uu siiyay Fifa, Rakitic waxa oo sheegay in ku faanayo ka garab ciyaarista Messi sidookale ay sharaf u tahay, waxa oo ku tilmaamay inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican kubada cagta xiligaan.
– Macno malahan qofka aad tahay, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad daawato isaga oo ciyaaraya kubbadda cagta kun raaxeysanaya. Dhamaan laacibtiinta kubadda ixtiraam ayey uga mudan laakiin waxaa jira hal Qof oo kaliya oo ah Leo. 311 kulan ee aan ka garab ciyaaro agtiisa waxay ii ahayd riyo, ayuu Rakitic u sheegay websaydhka Fifa.
Marka laga soo tago wada shaqeynta Messi, waxaa jira waxyaabo badan oo uu Rakitic ku xasuusto waqtigiisii ​​Barcelona iyo Guulaha uu ku faano.
– Lix sano aan kooxda joogay kama garab ciyaarin Messi kaliya laakiin waxaa jiray Dani Alves iyo Mascherano, Waxaan dhihi karaa waa mid kamid ah taariikhdayda kooxda oo ka hadli doono inta aan noolahay. Aad ayaan ugu faraxsanahay waqtigeyga aan kusoo qaatay kooxdaydii hore sidookale waxa ay igu reebtay xusuus aan tirmi doonin had iyo jeer aniga ayey qaas ii noqon doonto.
Kusoo laabashadayda Sevilla waa ii farxad sababto ah la,aanteeda hormarka aan kasoo sameeyey Barcelona majiri lahayn, waxaana xooga saari doonaa sidii aan guulo muhiim ah ula gaari lahaay inta aan u ciyaarayo.